Umlilo waseZhenhui e-Zhongshan Idolophu yakudala ye-International Lighting Fair ngo-Oktobha 22-26, 2020
Ama-25 e-China Guzhen International Lighting Fair axhaswe ngumbutho we China Lighting Appliance Association, i-China Lighting Capital (idolophu yase-Zhongshan yamandulo), kwaye yenziwa sisixeko sesibane sase-Zhongshan Guzhen, i-Expo Co., Ltd. Urhulumente wabantu. Umboniso usekwe kwiqela lezemveliso yemveliso yokukhanyisa kunye norhwebo olungaphezulu kwe-100 yezigidigidi ze-yuan kwiDolophu yaseGuzhen, "ikomkhulu leziko lokukhanyisa lase China" Ngomxholo "isixeko ukukhanya China kaThixo, ukukhanyisa ihlabathi" njengomxholo, ngokuqhubekayo nzulu "1 + 7" imo umboniso ivenkile indlela imo. Isikali mboniso ingaphezulu kwe-1.5 yezigidi zeemitha zesikwere, kwaye ngaphezulu kwama-2500 amashishini akumgangatho ophezulu ngokudibeneyo avela. Ngezibane ezikrelekrele njengokugxila, ukukhuthaza ukuphuhliswa kweshishini le-4.0, kunye nokudala umboniso wobuchule, ojolise kwimakethi, kwilizwe liphela nakwimiboniso yokukhanya
Ngo-Okthobha 22-26, 2020, ikomiti eququzelelayo yadlan 'indlebe nabasebenzi bezentengiso baseZhenhui.
Inkampani ijolise kwi-R
& D, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo yemigangatho ephezulu yokukhanyisa izibane zomlilo, unikezelo lwamandla olungxamisekileyo, inkqubo yolawulo lomlilo esembindini kunye nezinye iimveliso, ngelixa kusakhiwa iqonga lomlilo elinengqondo.
Inkampani ineqela lophando lobuchwephesha kunye neqela lophuhliso. Iimveliso zihambelana ngqo ne-gb17945-2010, i-GB3836 kunye ne-gb12476 imigangatho, kwaye zifumana i-3C isatifikethi esinyanzelekileyo, isatifikethi sokuqhushumba-ubungqina kunye nesiqinisekiso se-CE samazwe aphesheya semveliso yomlilo. Okwangoku, inkampani iphumeza imigangatho yobuchwephesha ye-gb51309-2018 ekhutshwe ngu-Mphathiswa Wezindlu kunye nophuhliso lwamaphandle ezidolophini, kwaye ithatha inxaxheba ekuhlanganiseni i-atlas esemgangathweni yoyilo lwesizwe.
wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi, shiya i-imeyile yakho okanye inombolo yefowuni kwifom yoqhakamshelwano ukuze sikuthumele ikowuti yasimahla kuluhlu lwethu olubanzi loyilo!